Qaababka muuqaalka: maxay yihiin, noocyada qaabab sawir | Abuurista khadka tooska ah
Encarni Arcoya | | Sawirro
Xaqiiqdii in ka badan hal jeer, markaad internetka ka baareyso, waxaad la kulantay qaab muuqaal kale oo muuqaal ah oo aan adiga u ekaan. Xaqiiqdii, dhawaanahan waxaad arki kartaa isbeddel tan iyo mashiinka raadinta muuqaalka (Google, tusaale ahaan), markaad kaydinayso sawir, jpg-ga caadiga ah uma muuqan, laakiin webp. Oo waxaa jira qaabab badan oo muuqaal ah.
Laakiin, Waa maxay qaababka sawirku runtii? Waa imisa Oo waa kuwee kuwa ugu isticmaalka badan? Maanta, waxaan ka hadalnaa iyaga.
1 Waa maxay qaabab muuqaal ah?
2 Noocyada qaababka muuqaalka
2.1 JPG, JPG, JFIF
2.8 Qaababka Sawirka: EPS
2.9 Qaababka sawirka: BMP
2.10 Qaabab kale oo aad loo yaqaan
Waa maxay qaabab muuqaal ah?
Qaabab muuqaal ah, oo sidoo kale loo yaqaan qaabab feyl fayl ah, ayaa runtii ah hab lagu kaydiyo xogta sawirkaas iyada oo aan la isku qasbin, in kasta oo iyaduna la iskudhisi karo (luminta ama aan ahayn xogta) ama loo beddelayo vector.
Marka la soo koobo, waxaan ka hadlaynaa a feyl dijitaal ah oo ay ku jiraan dhammaan xogta lagama maarmaanka u ah sawirka la samaynayo. Xogtaan waa pixels, maadaama ay tahay waxa sameeya sawirka. Mid kasta oo ka mid ah pixels-ka wuxuu ka kooban yahay dhowr qaybood oo loo isticmaalo go'aaminta midabka sawirka. Sidaa awgeed, waxay kuxirantahay qaababka, sawirku wuxuu yeelan karaa tayo wanaagsan ama ka xun.
Noocyada qaababka muuqaalka
Internetka waxaad ka ogaan kartaa inay kuwa ugu caansan badanaa yihiin jpg (ama jpeg), png ama gif. Laakiin dhab ahaantii waxaa jira noocyo badan oo qaabab muuqaal ah. Waxaan ka hadlaynaa mid kasta oo iyaga ka mid ah.
JPG, JPG, JFIF
Erayadaan la soo gaabiyay, midka ugu yar ee aad ogaan doontid shaki la’aan waa kii ugu dambeeyay, maadaama aysan caadi ahayn in laga arko internetka. Si kastaba ha noqotee, dhammaantood way sameeyaan tixraac Ku Biir Kooxda Khabiirada Sawirada, ama maxaa lamid ah: JPEG.
Waxa ay sameyso ayaa ku cadaadinaya sawir luminaya sawir si miisaankeedu u yaraado. Si tan loo sameeyo, waxay isticmaashaa qaabka JFIF, JPEG Qaabka Isku Bedelka Faylka.
Tani waa tan ugu caansan internetka waxaana lagu gartaa waxyaabaha soo socda:
24-bit sawirro midab ah (waxay u adeegsanaysaa 8 jajab midab kasta oo RGB ah (cagaar, casaan, iyo buluug).
Cadaadiska luminta (oo ka caawiya inuu yareeyo).
Xaalufinta jiilka. Taasi waa, markii wax laga saxo oo la badbaadiyo marar badan waxay waayaan tayo ka badan.
Waxaa jira nooc, kaas oo loo yaqaan JPEG 2000. Tani waxay u oggolaan kartaa cadaadis lumis ama khasaaro la'aan laakiin si fiican looma yaqaan. Xaqiiqdii, waxaa kaliya loo adeegsadaa tafatirka filimka iyo qeybinta, tusaale ahaan, looxyada filimka.
Magacani wuxuu tilmaamayaa Qaabka Sawirka Sawirka Waa qaab rogrogmi kara oo aad ka heli karto internetka sida TIFF ama TIF, in kasta oo aanu aad u badnayn.
Waxyaabaha ay leedahay waxaa ka mid ah:
Awood u yeelan kartaa inaad keydiso sawirrada isku-dhafan leh lumis ama lumis la'aan.
Laguma taageerin daalacashada shabakadaha badan.
Waxay qabataa meelo midab gaar ah leh, sida CMYK, OCR, iwm.
GIF, ama Qaabka Isdhaafsiga Graphics, waa mid ka mid ah qaabab sawir badanaa loo isticmaalo abuurista badanaa animationsmaaddaama ay kuu saamaxayso inaad duubto feylasha sawirrada dhaqdhaqaaqa. Si kastaba ha noqotee, maahan mid gaar u ah tan, waxaa sidoo kale loo isticmaalaa sawirro maxaa yeelay waxay ku cadaadinaysaa khasaaro la'aan, taasi waa, waxay ilaalinaysaa tayada sawirka aad ku keydisay qaabkan.
Waxaa lagu gartaa iyadoo la keydinaayo dhammaan macluumaadka sawirka miiska la yiraahdo midabka midabka, kaasoo ka koobnaan kara illaa 256 midabo (8 jajab). Way fududahay in laga helo internetka, inkasta oo inta badan loo adeegsado astaamo (bilaa asal ah si ay u noqoto mid hufan), animations, clip arts, iwm.
PNG waxay u taagan tahay Sawirada Shabakada La qaadan karo. Markii hore si ballaaran looma isticmaalin (waxaan ka hadlaynaa 1996) laakiin hadda waxaad si fudud ku heli kartaa sawirro iyo sawirro leh qaabkan.
Waxyaabaha ay ka mid yihiin:
Ku cadaadi sawirada khasaaro la'aan.
Sii qoto dheer oo midab ah illaa 24 xoogaa (oo aan ahayn 8 tusaale ahaan kuwii hore).
Waxay leedahay kanaal alfa ah oo 32-bit ah.
Ma soo saari karto animations.
Wuxuu aqbalaa daahfurnaanta iyo kala-badhnaanta suuqyada.
Hadda Waxaa badanaa loo adeegsadaa sawirrada iyo sawirada, astaamaha, sawirro aan khasaaro laheyn, sawirro u baahan daahfurnaan, iwm.
Faylka noocan ah waa kan waxaa lagu abuuray Adobe Photoshop (ama lamid ah). Waxaa loo isticmaalaa in lagu keydiyo sawirka leh tayada ugu sareysa, iyadoo aan lagaa lumin wax shaqo ah oo aad awoodid inaad qabato. Xaqiiqdii, waxay leedahay faa'iidada ay keydineyso wax walba, oo ay kujiraan isbeddelada, lakabyada, qaababka ... si aad dib uguheli karto hadhow haddii aadan ku qancin natiijada adigoon bilaabin inaad kasoo bilowdid xoqida.
Dhibaatadu waxay tahay inaadan ku arki karin sawirrada noocan ah biraawsarka, waxaa kaliya lagu furi karaa barnaamij gaar ah si looga dhigo inay shaqeeyaan.
Qaabka muuqaalka WebP waa mid ka mid ah kuwa ugu yar ee la yaqaan, laakiin mid aad si fudud uga heli karto internetka hadda. Waa qaab badbaadinaysa sawirka leh iskudhafid baahsan oo aan lahayn sawir lumis.
Ujeeddada qaabkani waa in la yeesho cabbir yar sidaa darteed, soo noqoshada, waxay si dhakhso leh ugu rartaa bogga. Naqshadeeyay Google, waxay ku saleysan tahay qaabka gudaha ee loo yaqaan "VP8 intra-encoding" oo waxay leedahay weel RIFF ah.
SVG waxay u taagan tahay Sawirro Xajmiyeyaal Scalable. Waa mid ka mid ah qaababka muuqaalka ee aad ka heli karto gebi ahaanba bilaash oo inta badan diiradda saaraya dulinka. Sida GIF oo kale, waxaad sidoo kale ku noolayn kartaa sawirro qaar SVG. Dhibaatada kaliya ayaa ah in noocyada qaababkan aysan wali taageerin shabakadaha bulshada.
Qaababka Sawirka: EPS
EPS waa Iskuxirnaanta PostScript. Dhab ahaantii, waa qaab in wuxuu abuuray Adobe, laakiin PDF-ga ayaa badalayay.
Qaababka sawirka: BMP
BMP waxay u taagan tahay Bitmap. Waa mid ka mid ah qaababkii la bilaabay in la isticmaalo 90-meeyadii oo lagu gartay sameynta Cadaadis badan oo tayo lumis ah, taas oo muujineysay in cabirka feylal kastaa ay aad u ballaadhnayd (soocelinta xallinta sawirku way fiicnayd).
Maanta wali waa la isticmaalaa, inkasta oo ay ka yar yihiin qaabab kale oo muuqaal ah.
Qaabab kale oo aad loo yaqaan
Marka laga reebo kuwa aan soo sheegnay, waxaa jira qaabab kale oo muuqaal ah oo aan caan ku ahayn caan ahaan, laakiin xirfad ahaan, waa loo isticmaali karaa. Kuwani waa:
Exif. Kani waa feyl la mid ah JPEG iyo TIFF. Waxa ay qabato waa duubista xog badan sida dejimaha kamaradaha, markii sawirka la qaadayay, heerka soo-gaadhista, iwm.
PPM, PGM, PBM ama PNM.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Sawirro » Qaababka muuqaalka